खसआर्य मारिदा मिडियामा कोलाहल मच्यो तर थारु मर्दा मिडियाले लेखेन,देखेन :-खगेन्द्र संग्रौला - MONGOL KHABAR
खसआर्य मारिदा मिडियामा कोलाहल मच्यो तर थारु मर्दा मिडियाले लेखेन,देखेन :-खगेन्द्र संग्रौला
काठमाडौं / लेखक तथा स्तम्भकार खगेन्द्र संग्रौलाले नेपालको संविधानको कटु आलोचना गर्दै यसलाई ‘नश्लवादी’ र ‘आपराधिक’ संज्ञा दिएका छन् । उनले अहिलेको संविधान खस आर्यहरुले बनाएको र देशको आधा जनसख्या सविधानमा असन्तुष्ट भएको समेत दावी गरे ।
पोखरामा आयोजित साहित्य सम्मेलनका क्रममा संग्रौलाले ‘म यसकारण राष्ट्रवादी होइन’ शिर्षकमा करिब आधा घन्टा बोलेका थिए । त्यस क्रममा उनले राष्ट्रवादको चिन्तन माथि प्रहार गरे । नेपालका मिडियाहरु पनि नश्लवादी भएको दावी गरे । पृथ्वीनारायण शाहले गरेको राष्ट्र एकीकरणमा समेत खिसिट्यूरी गरे । संग्रौलाको विवादास्पद भाषणको सम्पादित अंश :
राष्ट्रवाद भनेको आफैंमा नश्लवादी चिन्तन हो । अमेरिकाका डोनाल्ड ट्रम्प हुन्,भारतका नरेन्द्र मोदी हुन् वा नेपालका केपी ओली, सबैभन्दा राष्ट्रवादको स्रोत नश्लवाद नै हो । यस्तो राष्ट्रवादले आफूलाई श्रेष्ठ देखाउन सत्रुको निर्माण गर्छ । ट्रम्पले अश्वेत र आप्रवासीलाई सत्रु बनाए । मोदीले पाकिस्तान र मुस्लिमलाई । अनि केपी ओलीले भारतीय विस्तारवाद र मधेसीलाई सत्रु बनाए ।
संविधान निर्माण प्रक्रियाको चर्चा गरौं । संविधान कसरी बन्यो ? एउटा जात वा नश्लले अर्को समुदाय माथि हिंसा थोपर्दै, मान्छे मार्दै, रगतको खोलो बगाउँदै संविधान बनाएको होइन ? अन्तरिम संविधानको विधी–प्रक्रिया उल्लंघन गरेर फास्ट ट्रयाक भन्दै ज्यादतिको बीचमा संविधान बनाइएको होइन ? टिकापुर घटना घट्यो । टिकापुरको त्यो भूगोलमा अखण्डको नारा थियो । एउटा नश्लले अखण्डको नारा लगायो । त्यो पृष्ठभूमिमा टिकापुरमा हिंसा भयो र केही प्रहरी अफिसर, एक बालक मारिए । उनीहरु सबै पहाडी थिए । त्यसपछि थारु समुदायमाथि राज्यले जघन्य हिंसा थोप¥यो । पसल लुटिए । घरमा आगो लगाइयो । महिलाहरुमाथि दमन भयो ।
मधेसको कुरा गरौं । संविधान निर्माण भइरहेका बेलामा मधेसका केही असहमति थिए । अन्तरिम संविधानका स्थापित मानक पूरा गर्नुपर्ने आग्रह थियो । तर,गरियो के भने एउटा नश्लले, एउटा समुदायले संविधान निर्माण ग¥यो । मधेसलाई बाहिर राखियो । संविधान निर्माण प्रक्रियामै संलग्न गराइएन । मधेसी नागरिक मारिए । झण्डै ६० जना मधेसीको लाशमा टेकेर रक्तरञ्जित संविधान निर्माण गरियो । झण्डै देशको आधा जनसंख्यामाथि जघन्य हिंसा थोपरेर संवपवधान बनाइयो । यो विसुद्ध नश्लवादी छ ।
राष्ट्रवाद अतितमुखी हुन्छ । यसले भविष्यको कुरा गर्र्दैन । यसमा अतितका मूल्यहरुको गौरवगान गरिन्छ । पृथ्वीनारायणले केही भूगोलका टुक्रा जोडेपछि ‘असली हिन्दूस्ताना’ को नारा अलापियो । हिन्दूत्वलाई राज्यको धर्म र पहिचान बनाइयो । ‘हाम्रा साना दुखले आज्र्याको मुलुक होइन’ भनेर पृथ्वीनारायणले भने । तर राज्य कसले बनायो ? क पृथ्वीनारायणले गोर्खादेखि जंगल फाँड्दै आवादी गरेका हुन् ? हाम्रा बाँकी पुर्खा जुम्रा मारिरहेका थिए ? मदिरा पान गरेर लठ्ठीएका थिए ? वा कुम्भकर्णजस्तो ६ महिने निद्रामा थिए ?
फेरि संविधानकै कुरा । जुनबेला संविधान निर्माण भइरहेको थियो, मधेस आन्दोलन र टिकापुर घटना भइरहेको थियो, बिडम्बना सिंगो मिडिया सत्तामा विलय भएका थिए । मिडिया नै भयानक राष्ट्रवादी भएको थियो । राष्ट्रवादी नायकहरुको रचना आधारभूतरुपमा मिडियोले गरेको हो । टनकपुरमा पहाडी मारिए, तीनको श्रेष्ठताको गाथा गाइयो । थारुहरुमाथिको दमनको चर्चा भएन । मधेसमा त्यति धेरै मानिसहरु मारिँदा मिडियाले आपत्ति गरेनन् । मानौं संविधान निर्माण प्रक्रियामा मधेसी मारिनु गौरवको, पौरखको विषय हो । सनातनी दृष्टिकोणबाट यो देश खस आर्यले बनाएका हुन् । लामो समयदेखि सत्तामा खस आर्य थिए ।